Fiqh – Fatwa Somali
Qof Aan Wayso qabin Inuu Akhriyo Qur’aanka Su’aal: Sh.Ibnu Cusaymiin ayaa la waydiiyay xukunka in qofka aan wayso qabin Qur’aanka akhriyo? Jawaab: Waxba kuma jabna inuu qofka aan wayso qabini akhriyo Qur’aanka haaddii aanu taaban musxafka (kitaabka Qur’aanka), waayo akhrinta Qur’aanka shardi uma aha inuu qofku wayso qabo, haddiise uu janaabo leeyahay marnaba uma banaana […]
Xamuuradda Cidiyaha Iyo Weysada Su’aal: Waa maxay xukunka gabadh cidiyaha marsatay xamuurad? Jawaab: Xamuuradu waa walax (shay) la mariyo cidiyaha oo haweenku isticmaalaan waxayna leedahay dahaadh, mana banaana inay gabadhu isticmaasho haddii ay tukanayso waayo waxay manciyaysaa(diidaysaa) inay biyihu gaadhaan (cidiyaha) marka la dahaaro qaadanayo. Wax walba oo diidaya gaadhitaanka biyuhu uma banaana inuu isticmaalo […]
Weysada Qofka Ay Kaadidu Joogto Uga Socoto Su’aal: Maxaa ku waajiba qofka ay kaadidu uga daadanayso si joogto ah? Jawaab: Qofka ay kaadidu si joogto uga daadanayso (salasal bool) waxa ku waajiba in aanu u wayso qaadan salaada ilaa uu waqtigeedu soo galo, markuu maydho (dhaqo) xubinta tarankiisa waa inuu wax ku duubo si ayna […]
Halis Weyn Ayaa Ku Sugan Inuu Ninku Ka Maqnaado Xaaskiisa Muddo Dheer
Halis Weyn Ayaa Ku Sugan Inuu Ninku Ka Maqnaado Xaaskiisa Muddo Dheer ————————————– Su’aal: Ciraaq ayaan ka shaqeeyaa ee haddii ay duruufta shaqadayda iyo dhaqaale ay keenayso inaan gurigayga ka maqnaado laba sano iyo badh, maxaad u malaynaysaan. Ma xaaraan baa inaan mudadaa oo dhan maqnaado, wax i tusa Ilaahay khayr ha idinka siiyee? ————————————– […]
Ma Banaana In Inanta Lagu Qasbo Nin (zawj) Ayna Rabin
Su’aal: Waa maxay xukunka aabaha ku qasbaya inantiisa inuu u guuriyo nin ayna raali ka ahayn? _____________________ Sh.Ibnu Baaz ayaa ka jawaabay oo yidhi: Jawaab: arinkaasi ma banaana, waayo Nabiga صلى الله عليه وسلم ayaa yidhi: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها (Inanta bikrada ah waa inuu aabaheed ka idan qaato, idankeeduna waa aamuskeeda). Sidaa awgeed […]
Xukunka Kaatunka Arooska (fargalka)
Su’aal: Waa maxay xukunka kaatunka aroosku? ———————————— Kaatunka arooska (fargalka) waa kaatun uu ninku u hadyeeyo xaaskiisa, ragga qaarkood ayaa u galiya xaaska markuu doonayo inuu guursado ama markuu guursado ka dib. Dhaqankani waa mid aan dhinaceena hore loogu aqoon, Sheekh Albaani Ilaahay ha u naxariistee ayaa yidhi: waxa laga soo xigtay (laga soo qaatay) […]
Gaalada Laguma Aasi Karo Xabaalaha Muslimiinta
Su’aal: Hadduu nin Muslini guursado kitaabiyad ooy dhimato ma lagu aasi karaa xabaalaha Muslimiinta mise waa maya? Jawaab: Ma banaana in la guursado gabadh gaalo ah haddayna ahayn kitaabiyad, uma banaana inuu Muslimku guursado kaafirad haddayna ahayn kitaabiyad, kitaabiyaduna waa gabadha Yahuudiyada ama Nasaarada ah ee dhawrsoon ee lagu yaqaano dhawrsanaanta iyo zino la’aanta, waana […]
Muslinka Faasiqa Ah Waa Loo Ducayn Karaa
Su’aal: Markuu dhinto qof Muslina oo laakiin faasiq ahaa intuu noolaa miyay banaan tahay in Ilaahay loo waydiiyo naxariis? Jawaab: Haa, way banaan tahay in Ilaahay loo waydiiyo naxariis, looguna duceeyo inuu Ilaahay cafiyo una dambi dhaafo, siday u banaan tahay oo kale in lagu tukado salaadda Janaazada hadduu faasiq ahaa oonu gaal ahayn. Sh. […]
Irbada Insuliintu Ma jabinayso Soonka
Irbada Insuliintu Ma jabinayso Soonka Irbadaha Lugu Mudo Ama Lagu Duro Qofka Bukaa Waa Laba Nooc: Kow: Irbado jidhka siinaya nafaqo oo lagaga kaaftoomayo cuntadii iyo cabitaankii, irbadaha noocani wey jabinayaan soonka sida saxa ah. Inkastoo ay jiraan culimo qabta in aanu soonku ku jabayn. Laakiin sida saxi waa in soonku ku jabayo haddii la […]
Su’aal: Waa maxay xukunka ictikaafku? Bixitaanku ma u banaanyahay qofka muctakifka ah si uu xaajadiisa (musqusha) u guto, cunto iyo dawo raadsado? Waa maxay sunanka ictikaafku, Waa maxayse ictikaafka saxa ah ee ka sugan Nabiga (صلى الله عليه وسلم)? Jawaab: Ictikaafku waa in masaajidka lagu negaado si loogu banbaxo daacada Ilaahay (عزوجل) ,waana sune […]